Digniin culus oo loo jeediyay Kenya, kaddib dagaalkii maanta ka dhacay BeledXaawo! – HalQaran.com
Digniin culus oo loo jeediyay Kenya, kaddib dagaalkii maanta ka dhacay BeledXaawo!
March 2, 2020 March 2, 2020 HalQaran Staff	0 Comments dagaalkii maanta ka dhacay BeledXaawo, Digniin culus oo loo jeediyay Kenya, taliska ciidanka xoogga dalka, waqooyi bari Kenya
Gedo (Halqaran.com) – Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo, Korneyl Maxamad Caddow Cali (Sanka) ayaa Kenya ugu yeeray in ay joojiso waxa uu ugu yeeray daan-daansigeeda ka dhanka ah Soomaaliya.
Taliyaha ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii xooganaa ee maanta ka dhacay xuduuda Degmada BeledXaawo la wadaagto Degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inay ka itaal roonaadeen dadkii uu sheegay inay taageereysay Dowladda Kenya, ayna ka sifeeyeen xuduuda Degmada BeledXaawo ee Gobolka Gedo.
Taliyaha oo Warbaahinta kula hadlay Degmada BeledXaawo ayaa xusay in Ciidanka Kenya ay madaafiic ku soo tuureen Degmada Beled Xaawo, intii uu dagaalku socday, taa oo burbur uu ka soo gaaray dhismooyin ku yaala degmadaasi.
Waxa uu Kenya uga digay inay joojiso xadgudubyada ka dhanka ah Soomaaliya, haddii kalena ay Ciidanka Xoogga Dalka ka bixin doonaan jawaab adag oo ku aadan.
Waxa uu intaa ku daray in Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ku sugan xuduuda Degmooyinka BeledXaawo iyo Mandhera, ay u diyaarsan yihiin ka hortagga weerar kaga yimaada dadka ay taageereyso Kenya, sida uu yiri.
Guddoomiye Kuxigeenka Gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji ayaa dhankiisa ku goodiyay inay gudaha u geli doonaan Degmada Mandhera, haddii markale laga soo abaabulo weerar ka dhan ah Degmada Beled Xaawo.
Dagaalkii maanta ka dhacay duleedka Degmada Beled Xaawo oo ahaa mid xoogan ayaa sababay khasaaro dhimasho, dhaawac iyo mid maaliyadeedba leh.
Ugu dambeyn, dagaalkan ayaa noqonaya kiisii ugu xooganaa oo muddo sideed sano ah ka dhaca Degmada Beeld Xaawo, tan iyo markii laga xoreeyay mintidiinta Ururka Al Shabaab.
← Faah-faahin ku saabsan dagaalka culus ee ka dhacay degmada BeledXaawo +(SAWIRRO)
Somali Lower House speaker insists on one person one vote poll →
May 18, 2020 May 18, 2020 HalQaran Staff 0
September 20, 2019 September 20, 2019 HalQaran Staff 0